Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Saadaasha Doorashada Cusub ee UNWTO oo ay soo saartay WTN
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Ururka Dalxiiska Adduunka
Wufuud ka kala socota 113 waddan ayaa la filayaa inay ka codeeyaan shirka Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda ee ka dhacaya Madrid inta u dhaxaysa November 30-ka December 3. eTurboNews hadda waxay leedahay saadaal ay sii daysay Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Tirinta inta waddan ee u codayn doonta iyo inta ka soo horjeeda dib u cusboonaysiinta Xoghayaha Guud ayaa looga hadlayaa qodobkan.
Golaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) wuxuu isu diyaarinayaa inuu ka furmo Madrid laga bilaabo Noofambar 30 - Diseembar 3.
Ajendaha ugu badan ee la filayo waa codka sirta ah ee xaqiijinta dhageysiga Zurab Pololikashvili muddo kale.
Labada Xoghaye Guud ee hore ee UNWTO iyo daraasiin ka mid ah madaxda hadda iyo kuwii hore ee Dalxiiska Adduunka ayaa ku booriyay wufuudda inay codeeyaan MAYA dhageysiga xaqiijinta sirta ah.
Sidaana waxa lagu caddeeyey waraaqo furan oo isdaba joog ah oo ay soo saareen madaxdii hore ee UNWTO, habsami u socodka ololaha doorashada Shabakada Dalxiiska Adduunka, iyo Costa Rica oo codsanaysa a cod qarsoodi ah dhageysigan xaqiijinta.
Go’aankan hadda waxa uu gacanta ku hayaa ergada ka qayb galeysa shirweynaha guud ee usbuuca soo socda.
Marka loo eego saadaasha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee hadda la sii daayay, rajada dib-u-xaqiijinta ee doorashada Xoghayaha Guud waxay u taagan tahay sida soo socota 23-ka November.
7 wadan ayaa la filayaa inay xaqiijiyaan Zurab doorashada qarsoodiga ah
43 wadan ayaa la filayaa in aysan ku xaqiijin Zurab doorashada qarsoodiga ah
63 wadan ayaan wali go'aansan sida loo codayn karo doorashada qarsoodiga ah
2/3 ee codadka ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo.
Haddii aan la xaqiijin, doorasho cusub oo ay ku jiraan musharaxiin cusub ayaa soo bixi doonta. Habka saxda ah ayaa lagu sharaxay eTurboNews maqaalkan:
Hadda waxaa ka diiwaan gashan wufuuda shirka guud ee UNWTO ee soo socda
Haddii aad xubin ka tahay Shabakada Dalxiiska Adduunka, halkan ku dhufo a liiska wufuudda UNWTO ee Golaha Guud ee soo socda ee Madrid 2021;